चन्द्रगढी विमानस्थल भद्रपुरबाट ताप्लेजुङ उडान, लुक्लाको पनि तयारी – Jaljala Online
मङ्सिर ३०, झापा । सोमबारदेखि सीता एयरले चन्द्रगढी विमानस्थल भद्रपुरबाट ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलसम्म सीधा उडान गर्ने भएको छ।
पाथिभरा मन्दिर दर्शन गर्न भक्तजनलाई लक्षित गरि सुकेटारसम्मको उडान सुरु गर्न लागिएको सीता एयरका भद्रपुरका स्टेसन म्यानेजर राम अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘नियमति यात्रु नपाउँदासम्म हामी प्याकेज बनाएर यात्रुलाई सुकेटारसम्म लैजाने योजनामा सोमबार बिहानदेखि उडान सुरु गर्न लागेका हौं।’ डोनियर जहाजबाट उडान गरिने उनले बताए।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चन्द्रगढी विमानस्थलका प्रमुख पूर्ण चूँडालका अनुसार करिब एक साताका लागि ताप्लेजुङ उडानको तालिका बनाइसकिएको छ। सुकेटार विमानस्थलसम्मको उडान बिहान साँढे ६ बजे राखिएको छ।
पाथिभरा मन्दिर दर्शनका लागि जाने यात्रुका लागि सुकेटार विमानस्थलमा हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिएको चूँडालले बताए।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चन्द्रगढी विमानस्थल कार्यालयका अनुसार सीता एयरको जहाज विगत केही दिनदेखि चन्द्रगढी विमानस्थलमै रहेर लुक्ला तथा लामिडाँडासम्मको परीक्षण उडान पनि गरिसकेको छ।
लुक्ला विमानस्थलसम्म नियमित उडानका लागि प्रचार गर्न भारतको सिलिगुडीमा स्टलसमेत राखिएको सीता एयरका स्टेसन म्यानेजर अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘यहाँबाट लुक्ला विमानस्थलसम्म उडान गर्नका लागि भारतीय मुख्य ग्राहक हुन्। त्यसैले हामीले सिलिगुडीमा प्रचारका लागि स्टल राखेका छौं।’
साउन २५, धादिङ । धादिङको दरिगांल खोलामा डुबेर दुई युवा बेपत्ता भएका छन्। शनिबार बिहान गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित दरिगांल खोलामा नुहाउन गएका सुमन स्याङ्तान (२२) र भीम घलाङ (२१) खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका हुन्। यो खबर मनीष दुवाडीले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । उनीहरूसँगै नुहाउन गएका अरु दुईजनाले भने पौडेर ज्यान जोगाएका […]
आज २०७६ मंसिर २६ गते विहीबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ […]